SIDA LOO DHAQSIYO SI DHAKHSO AH U KARIYO HADHUUDHKA MICROWAVE EE BAAKADKA: INTEE IN LE'EG AYAY QAADANAYSAA, OO SUURTOGAL MA AH IN LA KARIYO SAXANKA ON KOOLLADA AMA SAMEYNTA DAANYEER? - KHUDRADDA
Inkasta oo, laga bilaabo aragtida sayniska, hadhuudhku waa dal dalagga ah, waxaa loo tixgeliyaa dadka in ay noqdaan cuntooyinkooda sababta oo ah hababka karinta. Xukun noocan oo kale ah ayaa si buuxda loo caddeeyey, maaha mid ka sii liidata khudaarta ku jirta fitamiinada iyo nafaqooyinka.
DAREEN: Corn waa dhir dhir dheer oo sare u kaca ilaa 3 mitir. Qaybta la cuni karo waa cob, oo ka buuxsamay miraha.
Corn waa la soo saaraa: badarka, burka, istaarijka, khamriga, calafka isku dhafan, saliidda hadhuudhka ah. Qaybaha soo haray waxay kaloo aadaan ganacsi. Oo iyaga waxaa laga baabbi'iyey hay iyo falfal.
Qalabka kalluunka ee maaddada waxtarka leh. Kernels Corn waa alaab iibiyaal oo hodon ku ah jirkeena, sidaas darteed, isticmaalka badeecadani waxay hagaajisaa waxqabadka qandhada iyo qarsoodiga ee nidaamka dheef-shiidka, waxay gacan ka geysataa isdaba-joogsiinta sunta, radionuclides, sunta iyo jeexjeexyada jidhka.
"Boqoradda beertu waa mid hodan ku ah fitamiinada. 150 garaam oo hadhuudh ah ayaa bixin doona heerka maalinlaha ee fiitamiinada ee kooxda B. Taas macnaheedu waa shaqo fiican ee habdhiska dareenka, adkaysiga cadaadiska. Faytamiin E wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshay muuqaalka muuqaalka..
Dad tiro yar ayaa ogaanaya in cobsiyada baruurta la barbar dhigo beerka ku jira birta birta ah (3700 mcg), taasina waxay ka dhigaysaa mid aan loo baahneyn daaweyn iyo ka hortagga dhiig yari, gaar ahaan haweenka uurka leh.
Magnesium iyo potassium waxay leeyihiin saameyn wax ku ool ah oo ku saabsan hawsha nidaamka wadnaha, hoos u dhigista khatarta ah in uu ku dhaco stroke, weerarada wadnaha iyo cudurrada kale ee wadnaha. Fiitamiinada iyo antioxidants waxay saameyn fiican ku yeeshaan maqaarka, ciddiyaha, timaha, waxay hoos u dhigaan geedi socodka gabowga.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee hadhuudhka:
Si aad u sameyso saxaarad dhadhan leh oo caafimaad leh, waxaad u baahan tahay inaad qaadato hab masuuliyad u leh xulashada alaabta. Midho aan qaangaarin, midho badan oo la jaray ama la baabiiyay maaha oo kaliya inuu dhadhamiyo dhadhanka saxanka, laakiin sidoo kale wuxuu waxyeello u geystaa caafimaadka. Si aad u dooratid dhagaha midigta ee hadhuudhka, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka fudud.:
Ka iibso kaliya dukaamada ama meelaha la xaqiijiyay. Cuntada ha ka qaadin gacanta. Qofna ma dammaanad qaadi doono kaydinta ku habboon.
Qiimee muuqaalka koollada. Caleemaha waa inay ahaadaan midab cagaar ah oo ku haboon kumbuyuutarka, midabka midhaha ayaa ah dharka, iftiin huruud ah.
Fiiro gaar ah u leh joogitaanka caaryada. Xitaa qadar yar oo ka mid ah waxay muujinaysaa in midhahaas aan la cuni karin.
Haddii aad burburinayso abuur, dareere dhalaalaya oo dhalaalaya ayaa gudaha ka muuqan doona - tani waa calaamad muujinaysa in hadhuudhku uusan kicin.
TALO: Xilliga ugu wanaagsan ee lagu iibsado hadhuudh waa dhammaadka bisha Agoosto. Tani waa wakhtigii koriinkeedaba. Haddii aad ku iibsato hadhuudhka, ama xilliga dayrta-xilliga qaboobaha, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso kaydinta ku haboon.
Si aad u kaydiso qaboojiyaha marka hore waxaad u baahan tahay:
Ka saar kabaha laga soo bilaabo "cob" oo jar jar "buraash".
Ku qoynin cobs diirran oo biyo ah cusbo iyo liin ilaa 20 daqiiqadood.
Iska xejin kariifka, sug ilaa inta dareeraha la miiray.
Ka saar miraha ka soo jeeda.
Ku kaydi weelasha hadhuudhka ku jirta weel cuntada lagu xiro.
Ka hor inta aadan bilaabin hadhuudhka, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso.. Tani ma fududa in la sameeyo:
Dhagac ka dhegeyso tuubada hoostiisa.
Iska yaree caleemaha qallalan oo wasakhaysan leh mindi.
Coors Large cut dhafan laba qaybood.
Ku shub biyo qaboow oo ka tag hal saacad.
Haddii hadhuudh badan oo la kariyo ka hor inta aan la karin wax caano ah afar saacadood, soodhada ka soo baxaysa waxay noqon doontaa mid jilicsan oo casiir leh (oo ku saabsan inta la kariyo hadhuudhkii hore si ay u noqoto mid jilicsan oo casiir leh, halkan ka akhriso).
Cunto degdeg ah ma sameyn karaa?
Haddii aad ka welwelsan tahay intaad ku karsanaysid hadhuudhka, ka dibna diyaarinta siriyaalkan waa geedi socod dheer. Iyada oo ku xiran heerka qadada ah ee karinta hadhuudhka waxay qaadan doontaa 30 daqiiqo ilaa 3 saacadood. Waqtigan waxaa si weyn hoos loogu dhigi karaa haddii aad isticmaasho mikrovave. Hadda waxaa jira mikrovave ku dhowaad jikada kasta. Hooyooyinka intooda badan waxay u isticmaalaan si ay u kululeeyaan una diidaan cuntada, inkasta oo adeegga qalabka casrigu uu kuu ogolaanayo inaad karisid saxan buuxda.
Si dhakhso ah loo kariyo hadhuudhku wuxuu u baahan yahay:
bacda cuntada ee cellophane;
suxuunta ku habboon isticmaalka foornada mikrowerka;
dhowr cobs hadhuudh;
cusbo, dhir udgoon.
Mabda'a karinta hadhuudhka ee xirmada suxuunta kala duwan waa isku mid:
Si fiican u raaci hadhuudhka, ka saar caleemaha ka soo jeeda.
Daadi cobsiyada la diyaariyey laba xabbo oo milix ah, ku rid bac caag ah oo la dubayo.
Xirmad isku mid ah ku shub laba ama saddex qaado oo biyo ah.
Si adag ugu xir xarkada xirafka ama dhejisyada leh dhejiyo khaas ah si aysan waxyaabaha ku dhicin.
Ka soo kabashada sare, si taxadar leh u samee labo god oo ku jira baakadka leh mindi, 1 cm oo cabbir ah, sidaas darted ayaa ka soo baxa, laakiin waxyaabaha aan ku dhicin.
Waxyaabaha baakooyinka ku rid muraayada adigoo aan daboolin.
Microwave 7-10 daqiiqo awood buuxda.
Habkani waa wax aad u sahlan oo sahlan oo la fulin karo, wakhtiga badbaadada, wuxuu u baahan yahay kharash yar. Mashiin si dhakhso ah loo kariyey baakadu waxay ilaalinayaan microwave ka faddaraynaya kiiska marka la gooyo miro.
Daawo fiidiyowga ku saabsan karinta hadhuudhka foornada foornada mikrowave:
Cuntada ugu caansan ee hadhuudhka. Waa sahlan tahay in lagu kariyo microwave ee xirmada, raaco tilmaamaha sahlan.
Wixii karinta ayaa u baahan:
cusbo ama sonkor.
Tilaabooyinka Toosinta Tilmaamaha:
Si fiican u raaci hadhuudhka, si tartiib ah uga soo saar maqaarka dufanka leh mindi.
Qeybta hoose ee bac caag ah ee dubista, ku shub labo qaado oo saliidda cuntada ah.
Ku rid maadada bacda, si adag u xir xarkaha, ama ku xir dhejis gaar ah si markaa aanay u helin hurdo ku filan.
Rux bacda leh waxyaabaha ku jira si aad u hesho dhammaan maaddada gudaha si siman loo saliido.
Ku kari foosto microwave leh awood buuxda ilaa 2-3 daqiiqadood.
Daraasadda Reerku waxay ku shubtaa baakada ku jirta saxanka, kula saydhaa cusbo ama sonkorow inay dhadhamiso.
Ku darso diirimaad ama qabow.
MUHIIM: Hannaanka cunto karinta ayaa kordhin doonta si weyn, sidaas darteed waa inaad isticmaashaa qaybo yaryar.
Tilmaame-barashada bukaanku waa in dhegta loo diyaariyo si sax ah caleemaha. Si arrintan loo sameeyo, dhagaxyada ugu wanaagsan ee dhallinyarada leh caleemo cagaaran. Biyaha kiiskan ma ahan lagama maarmaan in la isticmaalo, qoyaanka lagama maarmaanka ah ayaa siin doona cagaarka cusub ee khadka.
cusbo, basbaas, cagaarka.
Biyaha daacad ah ku biyo raaci.
Iska yaree caleemaha qalalan leh mindi, ka tag oo kaliya cagaar.
Ku darso koollada tuwaal waraaq ah dhamaan dhinacyada.
Ku rid bac caag ah oo lagu dubo oo aan ku darin biyo, si adag u xidh dharka ama xirmo gaar ah.
Ku rid baakadda ku xigta xadhigga, samee labo ka mid ah 1 xabbadood oo mindi leh mindi si markaa inta lagu jiro cunto karinta la sii daayo, laakiin waxyaabaha aan hoos u dhicin.
Baako ku rid weel dhalada ah oo aan lahayn dabool.
Ku kari foosto mikrowave 5-7 daqiiqo korontada oo dhan.
Qaado sarreenka dhamaystiran ee bacda, ku rid on saxanka, caday kasta oo dhan on top ee subagga.
U adeegso, ma ciribtiro caleemaha, cun gacmaha, haynta caleemaha, adiga oo aan isticmaalin cutlery.
Nidaamkan wax lagu kariyo wuxuu u fiican yahay in la cuno cunto fudud. Rooti la karkariyay ayaa runtii ku farxi doonta carruurta.
cusbo, basbaas, cagaarka;
Ka saar caleemaha ka soo cayayaanka ee cabbirka isku mid ah, si fiican u biyo raaci biyaha.
Iska yaree cobsaha ilaa 5-6cm.
Ku rid bacda balaastiga ah ee dubista, ku dar 2-3 qaado oo biyo ah.
Si adag u xir bacda qafiska ama ku dhow xirmo gaar ah.
Bustaha kor ku xusan, samee laba god oo leh 1 mindhicir mindhicir ah.
Microwave 5-7 daqiiqo awood buuxda.
Ku rid bareesada diyaarka ah ee boorsada si saxan, kula saydhaa gabal yar oo subag, ku dar milix, xawaash iyo dhir udgoon.
Dhexdhexaad kasta bartilmaameed leh qoryaha alwaax, sidaas darteed waxay ahayd raaxo leh in ay haysato gacanta.
U adeegso, la dhigo saxanka, sida cunto fudud.
Foorno leh basbaas macaan
2 basbaas macaan;
400 g oo ah hadhuudh la kariyey;
200 g oo ah maraq lo'da;
dhulka basbaaska madow.
Basasha diiray, jarjar xabadaha yaryar.
Waxaad shiishaa basasha digsi isticmaalaya saliidda cuntada ilaa bunka dahabka ah.
Iska ilaali hadhuudhka, nadiifi caleemaha.
Karkari, kala sooc hadhuudhka kore ee tuubada leh mindi.
Isku dar ilaa hadhuudhka digsiyada ku jirta digsi kadibna kari 5 daqiiqo oo kale
Ku dhaq basbaaska, ka saar miraha, ku jar jarjar yar.
Ku dar basbaaska digsiga si basasha iyo hadhuudhka.
Dhammaan maadooyinka ayaa si fiican isku qasan, milix, basbaas ay u dhadhamiyaan oo ku shub maraq hilibka.
Iska daa daboolka ilaa inta la kariyey kuleyl dhexdhexaad ah.
Baro raashin badan oo loogu talagalay wax lagu kariyo hadhuudhka microwave halkan.
Suugaanta moofada waxaa loo isticmaali karaa cunto fudud ama saxan dhinaca saxanka ah. Xaaladda kowaad, waxaa loo adeegi karaa qabow ama kulul, ka dib markii la saliiday saliid, cusbo, cusbaynaya dhir udgoon iyo dhir.
Haddii hadhuudhku si sax ah loo kariyo, waxaad cuni kartaa adiga oo aan isticmaalin qalajiyaha, adoo ku dhajinaya caleemaha ama qafisyada gaarka ah. Walaashka xabuubka ayaa loo adeegsaday qaybo ama saxan caadi ahcunida fargeeto, caawinta mindi haddii loo baahdo.
Inkasta oo ay faa'iido u leedahay, kernels hadhuudh ah ayaa ka hortagaya dadka qaba boogo caloosha ama boogaha duodenal ah. Haysashada awoodda lagu kordhinayo xinjirowga dhiigga, hadhuudhku wuxuu waxyeello u leeyahay thrombophlebitis. Isticmaalka xad-dhaafka ah wuxuu keeni karaa saxarad, saxaro liidata, xitaa qof caafimaad leh. Ha cunin suxuunta laga soocayo hadhuudhka loogu talagalay dadka leh shakisanaanta shakhsiyeed ee sheygan.
Markaad kudheesho hadhuudhka microwave, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato:
Ha isticmaalin suumanka birta iyo dhoobada leh ee lagu kariyo foornada microwave!
Waqtiga karinta waxay kuxirantahay awoodda foornada microwave, cabbirka cobs. Waxaa muhiim ah in aan la gooyin hadhuudhka, haddii kale waxa ay u noqon doontaa mid qalalan oo adag.
Corn waa raashin la yaqaan oo la yaqaan. Waxaa la koray oo si firfircoon u baaba'ay sanado badan kahor. Waxaan kugula talineynaa in aad eegto qalabka kale ee loo isticmaalo talooyin iyo cuntooyin loogu talagalay caanaha, qulqulaya, miro-geedka iyo Bonduel ee mashiinka qafiifka ah, digada, foornada iyo feeraha.
Cunista cunnadu waa hab fiican oo aad u kala duwanaan lahayd cuntadaada leh saxan qabta oo caafimaad leh.. Lacag fiican ayaa ah in ay qaadan doonto waqti aad u badan si aad isugu diyaariso. Ku adkee qadadaas ama qadada caynkan oo kale waa adag tahay. Ku kari dhawr cobs oo ku yaal mikrowaytka, ka buuxi saliid iyo dhir udgoon iyo si wanaagsan u keen miiska iyada oo awoodda xitaa xitaa xaflad aan caqli-gal ahayn.